पछिल्लो पाँच महिनामा आत्महत्या गर्ने दर २० प्रतिशतले बढ्याे, कुन वर्ष कति? AahaKhabar
काठमाडौं, २५ भदाै । कोरोना महामारीपछि नेपालमा आत्महत्या २० प्रतिशतले बढेकाे छ । पछिल्लो पाँच महिनामा आत्महत्या गर्ने दर २० प्रतिशतले वृद्धि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेले भने, 'पहिले दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गर्थे भने हाल दैनिक २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको छन्।'
८० प्रतिशतलाई उपचार मार्फत आत्महत्या गर्नबाट रोक्न सकिने भन्दै डा पोखरेलले समयमै पहिचान गर्न सके आत्महत्याको दरलाई नै न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए।
आत्महत्याको योजना बनाउने, मर्ने तरिका बारे सोच्ने, धेरै नबोल्ने, घुलमिन नहुने, नकारात्मक कुराहरु सोच्ने र बोल्ने, उपचार गर्न नचाहने यसका लक्षणहरु हुन्। नेपालमा वर्षेनी ६ हजार जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
कुन वर्ष कतिले गरे आत्महत्या ?
सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि बिहिबारबाट निशुल्क रुपमा हेल्पलाईन सेवा सञ्चालन गरेको छ।
मानसिक रोग विभाग, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र सिविएम नेपालसँगको सहकार्यमा यो सेवा सुरु भएको हो। १६६०–०१–२१६०० मा फोन गरी परामर्श लिन सकिने मानसिक अस्पतालले जनाएको छ।